Tag: lifecycle staging | Martech Zone
Tag: lifecycle staging
Markii aan dhawaan wax ka qoray wixii la soo dhaafay, imminka iyo mustaqbalka suuqgeynta, hal meel oo diiradda la saaray ayaa ahaa otomaatig suuq geyn. Waxaan ka hadlay sida ay runtii warshadaha u kala jabeen. Waxaa jira xalal-dhamaadka hoose oo kaaga baahan inaad iswaafajiso hawlahooda si aad ugu guuleysato. Kuwani maaha kuwo raqiis ah costs kharash badan ayaa kumanaan doolar ah bishii waxayna asal ahaan kaaga baahan yihiin inaad dib u eegto sida shirkaddaadu u shaqeyso si ay ula jaan qaado hababkooda. Waxaan aaminsanahay inay tani masiibo u tahay dad badan